"कोरोनाको खोप लगाएको QR कोड पाउँदा एकदमै हर्षित हुनु पर्ने जनता भएको देश"- महाबीर पुन - Subhay Post"कोरोनाको खोप लगाएको QR कोड पाउँदा एकदमै हर्षित हुनु पर्ने जनता भएको देश"- महाबीर पुन - Subhay Post
सुभाय् संवाददाताAugust 7, 2021 मा प्रकाशित (५ महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ५ मिनेट
कोरोनाको खोप लगाएको QR कोड पाउँदा एकदमै हर्षित हुनु पर्ने जनता भएको देश । अनि जनताको मन जित्न साना साना काम गरे पनि हुने रहेछ भन्ने उदाहरण:
आज बिहान ३७ जना भाई बहिनीहरु राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा आए। मैले उनीहरुलाई कहाँ बाट आउनु भयो र के काम छ भनेर सोधें। उनीहरु रोजगारीको लागी कुवेत भन्ने देशमा जान लागेका रहेछन। “तपाईंलाई धन्यबाद दिन आएका हौं” भनेर उनीहरुले जबाफ दिए । अनि “मैले के नै गरें र धन्यबाद दिनु पर्यो” भनेर प्रश्न गरें। मेरो प्रश्नको उत्तर उनीहरुले यसरी दिए – “दाज्यु, तपाइंले गर्दा नै हामीले कोरोनाको खोप लगाएको QR कोड पाउने भएका छौं। तपाइले फेसबुकमा हाम्रो समस्या राखी दिनु भयो र सरकारले बाध्य भएर हामीलाई QR कोड दिने भयो” ।
उनीहरुको खुसीको अनुहार हेर्दा मलाई यस्तो लाग्यो कि मानौं उनीहरुले एउटा निकै ठुलो युद्ध नै जितेका छन । अनि एकदमै खुसि भएर मैले लिन नमान्दा नमान्दै पनि उनीहरुले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र लाई स्व-ईच्छाले १३ हजार रुपैंया पनि दान गरे ।
यो माथिको घटनाले मेरो मन एकदमै उराठियो । अनि भित्रै देखि रुनु कि हाँस्नु भएर आयो । सितिमिति भाबुक नहुने मलाई यो घटनाले एक छिन भाबुक पनि बनायो ।
बास्तबमा मैले केहि गरे कै होइन र धन्यबादको पात्र पनि म हुँदै होइन । त्यसको कारण यस प्रकार छ । केहि दिन अगाढी कान्तिपुरमा एउटा समाचार आएको थियो जसमा विदेश जाने भाई बहिनीहरुले कोरोनाको खोप लगाएको प्रमाण स्वरूप QR कोड लिन काठमाडौँमा सरकारी कार्यालयहरुमा धाएको, धर्ना बसेको र आन्दोलन नै गरिरहेको फोटोहरु सहितको विवरण थियो। त्यहि समाचारलाई उद्धृत गरेर मैले मेरो फेसबुक पेजमा यसो भनेर पोष्ट गरेको थिएँ – “यत्ति सानो काम गर्न सरकारलाई सहयोग चाहिएमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पनि तुरुन्तै सहयोग गर्न सक्छ। सरकारले रोजगारी दिन नसके पनि QR कोड लिन विदेशमा काम गर्न जाने भाई बहिनीहरुलाई यति साह्रै दुख त दिनु भएन नि ”
मैले गरेको त्यत्ति मात्र हो । मैले धन्यबाद पाउनु पर्ने कुनै काम गरे कै छैन । किन भने अहिले सरकारले नै QR कोड दिनको लागी अनलाईन फारम खोलेको रहेछ र त्यसको लिंक यो रहेछ – https://vaccine.mohp.gov.np/ । आज मलाई धन्यबाद दिन आउने भाई बहिनीहरुलाई के लागेको रहेछ भने मैले फेसबुकमा आवाज उठाएको हुनाले नै नेपाल सरकारले उक्त अनलाईन फारमको ब्यबस्था गरेको होला।
बास्तबिक रुपमा भन्नु पर्दा भाई बहिनीहरुको धन्यबादको पात्र त नेपाल सरकार हुनु पर्ने थियो नि । तर त्यसो हुन सकेन किन भने सरकारले त्यति सानो काम गर्न पनि अत्यन्तै ढिलासुस्ती गर्यो । यसबाट सरकारले र जो सुकैले पनि दुई वटा पाठ सिक्नु पर्छ । पहिलो पाठ जनताले दुख परेको बेलामा सरकार बाट आश्वासन मात्र होइन कि ठोस सहयोगको अपेक्षा गर्दछ । दोश्रो पाठ सरकारले सानोतिनो सहयोग पनि ठिक समयमा दिन सक्यो भने जनताको मन र बिश्वास जित्न सक्छ ।
बास्तबमा मैले अमेरिकाबाट फर्केर बिगत ३० बर्ष सम्म जनताको लागी र जनता संग मिलेर गरेको कुरा यहि नै हो । यो कुरा मलाई एकदमै राम्रो संग थाहा छ । मैले कसैलाई पाठ सिकाउन खोजेको होइन। आफ्नो अनुभब मात्र भनेको हुँ। यसो भन्दा कोहि नेताज्यूहरुको मन दुख्यो भने माफ पाउँ ! धन्यबाद ! (महाबीर पुनको फेसबुक पेजबाट)